याेनीबारे १० रोचक जानकारी, जुन तपाईलाई आजसम्म थाहै नहुनसक्छ - Everest Dainik - News from Nepal
याेनीबारे १० रोचक जानकारी, जुन तपाईलाई आजसम्म थाहै नहुनसक्छ
काठमाडौं, वैशाख १६ । यौन मानिसको सर्वाधिक चासो हो । तर हाम्रो समाजमा यसबारेमा खुला रुपमा छलफल र चर्चा गर्न वर्जित छ । त्यसैले यो थप जिज्ञासापूर्ण र चासोको विषय बन्ने गरेको छ । आफ्नै यौनांगका बारेमा धेरै कुराहरु मानिसलाई थाहा नहुन सक्छ ।
झन महिला गुप्तांग अर्थात् योनी निकै संवेदनशील र महत्वपूर्ण अंग हो । यसबारे सबै जानकार छन् । तर सम्भोगको सन्तुष्टिदेखि, गर्भाधान र सन्तान उत्पादन गराउने मार्गको रुपमा रहेको यो अंगका विषयमा केही अनौठा तथ्यहरु भने कमैलाई थाहा होला ।
याे पनि पढ्नुस योनी, यौनसम्पर्क र योनीको गन्ध
योनी बारेका १० रोचक तथ्य यस्ता छन्
१. योनीको औषत आकार ३–४ इन्च हुन्छ, तर सम्भोगको चरमोत्कर्षका बेला यसको आकार २ सय प्रतिशत सम्म वृद्धि हुनसक्छ ।
२. योनीको उत्तेजक भाग अर्थात् भंगाकुरमा ८ हजार वटा स्नायु हुन्छन्, जबकी पुरुषको लिंगमा केवल चार हजार वटा मात्र ।
७. गुप्तांगको भित्री भित्ता अन्य अवस्थामा मुज्जा परेर रहेको हुन्छ र सम्भोगको बेला उक्त भित्ता छाता जस्तै गरि फुक्दछ ।